रात नपर्ने पाँच देश, जहाँ ७६ दिनसम्म सूर्य डुब्दैन - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
रात नपर्ने पाँच देश, जहाँ ७६ दिनसम्म सूर्य डुब्दैन
Published On : १८ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:४८
एजेन्सी । संसारभरि सूर्य उदायपछि दिनको सुरुवात हुन्छ र सूर्य अस्ताएपछि रात पर्न सुरु गर्छ । तर, के तपाईंलाई थाहा छ, संसारमा यस्ता पनि देश छन्, जहाँ सूर्य अस्ताउँदैन । यी हुन सूर्यास्त नहुने पाँच देश :
नर्वे पहाडले घेरिएको देश हो । यहाँ मे महिनादेखि जुलाईसम्म लगभग ७६ दिनसम्म सूर्य अस्ताउँदैन् । नर्वेलाई ‘ल्याण्ड अफ द मिड नाइट सन’ पनि भनिन्छ । यदि तपाईं लामो समयसम्म उज्यालोको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने नर्वे घुम्न जान सक्नुहुन्छ ।
स्वीडेन यस्तो देश हो, जहाँ तपाईं आधा रातमा पनि सूर्य देख्न सक्नुहुन्छ । यहाँ मे महिनाको सुरुदेखि अगस्ट महिनाको आधासम्म राति सूर्य अस्ताउँदैन ।
आइसल्याण्डमा पनि तपाईं आधा रातसम्म सूर्यको उज्यालोको मजा लिन सक्नुहुन्छ । यहाँका झरना, ज्वालामूखी, हिमनदी र प्रकृतिको आकर्षक दृश्यले तपाईंको मन जित्नेछ । यहाँ १० मेदेखि जुलाईको अन्त्यसम्म सूर्य अस्ताउँदैन ।
क्यानडामा गर्मी मौसममा ५० दिनसम्म सूर्य अस्ताउँदैन । यहाँ पनि अँध्यारो हुनुपर्ने रात उज्यालो नै हुन्छ ।
फिनल्याण्ड पनि यस्तो देश हो, जहाँ गर्मी मौसममा ७३–७४ दिनसम्म सूर्य डुब्दैन । यो देशमा तपाईं स्किंग, साइक्लिङ, हाइकिङजस्ता गतिविधिसहित आनन्द लिन सक्नुहुन्छ ।